Radio Masti 87.9 MHz घरघरमा जोडियो ग्यास ! प्याट्ट खोल्यो, पकायो !
१९ साउन, बिराटनगर । वडा नम्बर १४ स्थित जतुवाकी द्रोपदी यादव सधैंझैं भान्सामा खाना बनाउन तल्लीन देखिन्थिन् । आफ्नै जीवनकालमा पाइपबाट भान्सासम्म ग्यास आउला भनेर उनले सोचेकै थिइनन् । तर, आयो ।भान्सामा आलु ताछ्दै द्रोपदीले भनिन् ‘अब हाम्रा पनि सुखका दिन आएजस्तै लागेको छ । अब ग्यास सकियो भन्दै सिलिण्डर बोकेर पसल–पसल चाहार्ने दिन गए ।’
पहिलो चरणमा ३२ घरले बिहीबारदेखि पाइपबाट आएको वायोग्यासबाट खाना पकाउन थालेकाछन् । थप सय घरमा वायो ग्यास पुर्‍याउने योजनासहित जतुवा क्षेत्रमा अहिले धमाधम पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ ।
ग्यास उत्पादनका लागि गौशाला परिसरमा ३ सय घनमिटर प्लान्ट जडान गरिएको छ । पाइपबाट वायो ग्यास वितरण गर्ने योजनासहित डेढ वर्ष अघिदेखि यो परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो ।
८५ लाख रुपैयाँ लगायतमा ग्यास प्लान्ट निर्माणको काम पूरा भएको छ  । भारतको गुजरातबाट आएका प्राविधिकहरुले काम गरिरहेका छन्
८५ लाख रुपैयाँ लगायतमा ग्यास प्लान्ट, पाइपलाइन र अन्य संरचना निर्माणको काम पूरा भएको छ  । ग्यास प्लान्ट जडान र अरू प्राविधिक कामका लागि भारतको गुजरातबाट आएका प्राविधिक र नेपाली प्राविधिकहरुले काम गरिरहेका छन् ।
‘हामीले यो नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको होइन,’ अग्रवालले भने, ‘हरेक घरमा मिटर राखिएको हुन्छ, जति ग्यास प्रयोग हुन्छ, त्यही मिटरमा उठेको शुःल्क लिइनेछ र यो बजारमा पाइने एलपी ग्यासभन्दा गुणस्तरयुक्त हुन्छ र मूल्यमा पनि सहुलियत हुन्छ  ।’ एक सिलिन्डर बराबरको अर्थात् १४ केजी एलपी ग्यासको मूल्यभन्दा ३ सय कम पर्न जाने सञ्चालकहरु बताउँछन् ।